Somaliland oo shaaca ka qaaday in Itoobiya ay qeyb ku leedahay dhaqaalaha dekedda Berbera – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Somaliland oo shaaca ka qaaday in Itoobiya ay qeyb ku leedahay dhaqaalaha dekedda Berbera
Maamulka Somaliland ayaa shaaca ka qaaday in Itoobiya ay qeyb ku leedahay dhaqaalaha kasoo xarooda dekadda Berbera, halkaas oo haatan lagu wareejiyay shirkadda DP World ee laga leeyahay dalka Isutaga Imaaraadka Carabta.
Wasiirka ganacsiga ee maamulka Somaliland Cumar Shuceyb oo ka hadlay munaasabadda xafladii shirkadda DP World maanta loogu wareejiyay dekedda Berbera ayaa sheegay in dowladda Itoobiya ay saami dhan 19% ku leedahay dhaqaalaha dekeddaasi kasoo xarooda.
Sababta ayuu wasiirka ku sheegay inay tahay in Itoobiya ay qeyb ka noqotay heshiiskaasi, maadaama dadka lala ganacsanaayo ay yihiin boqolka milyan qof ee ku nool Itoobiya, taasoo la yaab ku noqotay dadka reer Somaliland.
Waa markii ugu horeeysay uu maamulka Somaliland meel fagaare ah ka shaaciyo in dowladda Itoobiya ay qeyb ka tahay heshiiskii ay shirkadda DP World la gashay maamulkaaas.
Heshiiskaasi ayaa ahaa mid muran badan dhaliyay, waxaana si weyn uga soo horjeestay inta badan shacabka reer Somaliland iyo weliba baarlamaanka federaalka Soomaaliya.